Apple Watch Series7အတွက်တရားဝင်ရောင်းချမည့်ရက်မရှိပါ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Jordi Gimenez | 16/09/2021 12:00 | Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့က Apple ရဲ့မိတ်ဆက်ပွဲမတိုင်ခင်သီတင်းပတ်တွေကတည်းကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေ၊ ကောလဟာလတွေထဲကတစ်ခုပါ။ Cupertino ကုမ္ပဏီသည်နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်နာရီများထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ပြဿနာအချို့ရှိပုံရသည်။ ၎င်းကို၎င်းတို့အားအများပြည်သူအားပြသခဲ့သည်မှာမှန်သော်လည်း၊ သူတို့မှာတရားဝင်ရောင်းတဲ့ရက်မရှိသလိုကြိုတင်မှာယူတဲ့ရက်လည်းမရှိပါဘူး.
ပွဲမစခင်ရက်တွေတုန်းက Mark Gurman ကိုယ်တိုင် Apple ကနာရီတွေဖြန့်ချီတာဒါမှမဟုတ်စျေးနည်းနည်းလေးတောင်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးသတိပေးခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ၊ Gurman ၏ခန့်မှန်းချက်များသည်မှန်သည်နှင့်ယခုမှန်လာသည် ငါတို့ကဒီ Apple Watch Series7အသစ်ကိုဘယ်တော့ရနိုင်မလဲဆိုတာသိဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Apple ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ဆောင်း ဦး ပေါက်ရာသီကိုအရောင်းစတင်ချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်
Apple ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် Series7မော်ဒယ်များအတွက်တိကျသောရက်စွဲမရှိကြောင်းတွေ့နိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်ဆောင်း ဦး ပေါက်ရာသီတွင်စတင်ရောင်းချမည်ဟုပြောကြသည်။ အဲဒါကိုစက်တင်ဘာလမကုန်ခင်ဒါမှမဟုတ်ဒီလကုန်မတိုင်ခင်သူတို့ကကြိုတင်မှာထားနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်သူတို့မှာရှိနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့စတော့ကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သူတို့ကထုတ်လုပ်မှုနောက်ကျရင်၊ သူတို့ကစတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရောင်းအားအရမ်းများတဲ့မော်ဒယ်တွေသိပ်မရှိဘူး.
ယခုအချိန်သည်စောင့်ဆိုင်းရမည့်အချိန် ဖြစ်၍ Apple Watch အဟောင်းကိုပြောင်းရန်ဆန္ဒရှိသူများသည်မော်ဒယ်သစ်များမရောင်းမချင်းအနည်းငယ် ပို၍ စိတ်ရှည်ရန်လိုလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ကိုအရောင်ငါးရောင်နှင့်ရနိုင်သည်ကိုသတိရပါ ၎င်း၏ရောင်းဈေးသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိစီးရီး ၆ အတွက် ၄၂၉ ယူရိုမှတူညီသည် ငါတို့ကအဖြစ်အပျက်မှာဖော်ပြထားတဲ့စျေးနှုန်းကိုအာရုံစိုက်ရင်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ » Apple Watch Series7အတွက်တရားဝင်ရောင်းချမည့်ရက်မရှိပါ
Dolby Atmos နှင့် Sonos Beam သည်ယခုအခါလက်တွေ့ဖြစ်လာသည်